नेकपा फु'ट्नै लाग्दा जनमुक्ति सेना नेपालको यस्तो बयानले खैला* बैला, अब के गर्ला ओली सरकार ? - Onlines Time
नेकपा फु’ट्नै लाग्दा जनमुक्ति सेना नेपालको यस्तो बयानले खैला* बैला, अब के गर्ला ओली सरकार ?
ऊर्जाका अनेक माध्यममा बिजुली नै सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो र वातावरणमैत्री हो । तपाइँले खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । लुगा धुन, खाना पकाउन र अन्य घरायसी प्रयोजनको लागि पनि बिजुली नै प्रयोग गर्नुहोस् । जतिक्यो धेरै बिजुली प्रयोग गर्न मेरो आग्रह छ । प्राविधिक कारणले केहीबेरको लागि बत्ती गएमा धैर्य राखि दिनुहोला
Prevछोरी जन्माएको १ घण्टामै आमाको मृ’ त्यु, परिवारसँग शिशुका लागि दूध किन्ने पैसा समेत छैन (सहयोग काे लागि सेयर गराै)
Nextमहोत्तरी ब’ला’ त्कारीको घरमा आ ‘गो लगाइयो,६ वर्षी’ या बा’लिकाको ब’ला’त्कारपछि ह’ त्या